UKUQALA OKUQHELEKILE: UMartin Vrijland
U-Ben Goertzel umklami womklami uSophia: "Unezinketho ze-2 noma i-plug ku-AI noma uhlala ku-zoo yabantu"
ahanjiswe UKUQALA OKUQHELEKILE, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-25 December 2017	• 18 Amazwana
UBen Goertzel uyisipiliyoni esikhethekile emkhakheni we-AI. Waphumelela kwi-19e yakhe ngezinga lesibhakela ku-Quantitative Studies. Ngakho waqala ngolwazi oluningi lwezembalo ngesikhathi esencane wabe esethola i-PhD ngezibalo. Wabe eshintsha isayensi yocwaningo futhi ekugcineni wayesebenzisa [...]
Okokuqala, kufanele ukhulume mayelana nokwenza izindaba inkohliso abadlali. Lokhu kwenziwa ngabantu eminyakeni eminingi edlule futhi waqoqa ebucayini baye ukunikeza ibhonasi nice noma isib umusho encishisiwe noma ungubani entsha (kude) futhi ukuguqula ukuba [...] izindaba yesehlakalo
ahanjiswe UKUQALA OKUQHELEKILE, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-6 December 2017	• 7 Amazwana
Ukuze uqonde indlela yokwelapha isifo, udinga ukuqonda okuyinhloko yenkinga. Ukuze uqonde ukuthi ungamelana kanjani nesitha, udinga ukwazi futhi uqonde ukuthi ungagcina kanjani ingozi esiseduze, kufanele uqonde ukuthi ingozi yini. Ngakho-ke kufanele uqale uthole ulwazi [...]
ahanjiswe UKUQALA OKUQHELEKILE, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-3 December 2017	• 13 Amazwana
UGeordie Rose, umsunguli wenkampani eyakha amakhompiyutha wokuqala we-quantum, i-D-Wave, iqalile inkampani entsha ezokwakha 'i-Real AI'. Yilokho ukuhlakanipha okusebenzayo, kodwa kusukela ezingeni elingakwazi ukuhlukaniswa nokuhlakanipha kwabantu futhi lidlula. Esikhulwini esingezansi lapho ethula khona inkampani uchaza [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.369.113